Oromo Affairs: March 2010
Political Vision or Religious Revelation?
“… and many false prophets shall arise and shall mislead many. Behold, I have told you in advance” (Matthew 24:11, 25).
Politics is an unclean game by its very nature. Those who mix religion with politics do so at their own peril. As one can see from the Scripture (Matthew 22:21), it would seem advisable to leave politics for the politicians and religion to the religious leaders. The scripture also warns of false prophets.
First, it was the Reverend Belina Sarka of the Oromo Lutheran Church. According to him, after listening to his prayers for unity and territorial integrity of Ethiopia since 1977, the Lord answered his prayer as he was meditating in Hermannsburg, Germany. The Lord appeared to him one morning at 3:00 AM, in 2002. Just as He revealed the Ten Commandments to Moses in the form of a tablet, so he did the future of Ethiopia to Reverend Belina in the form of a TV show. In this show, says the good reverend, the Lord showed him the future of Ethiopia and her “fourteen provinces.” Listen to this! The Lord, actually showed the reverend that Ethiopia will return to her former glory of owning “fourteen” provinces which will include Eritrea.
According to Revererd Belina, the TV show consisted of three scenes. The first scene was about Eritreaea, Tigray, Gondar and Walloo. They are blessed to become the industrial backbone of Ethiopia. Scene two dealt with Bale, Arsi, Shawa and Gojjam and the agricultural products they will be producing to feed the empire. In scene three, the Lord revealed to him that Harahge, Sidamo, Wallaga, Gamo Gofa and Illu Babba Boora will produce abundant fruits, tea, coffee and spice. In other words, Northern provinces will technologically develop but Oromos and others in the South will remain agricultural societies.
Watching this false prophesy on Youtube HERE and watching the reverend frequently referring to his notes, I could not help wondering if the God that revealed all this to him lacked the power to endow him with perfect memory to remember what He revealed to His “servant.” By his deed, Belina caused me doubt God’s power and almost led me astray for a moment. Then God, in his grace, helped me remember Jesus’s warning in Mathew 24:11. As a human being and a Lutheran, I felt insulted and betrayed. Insulted, because Rev. Belina took me for an imbecile. Betrayed, because such Political visions disguised as religious revelations by someone of Rev. Belina’s stature will reflect badly on the Lutheran Church.
The good reverend has all the rights to support political ideas or parties of his choosing. He has the right to present his ideas for the future of the empire as a person. However, to try and present his political belief as that of God has no other purpose than to intimidate opponents of his idea. It is to present unity and territorial integrity of Ethiopia as God’s will and never to be challenged regardless of the unjust nature of the empire.
As some one once said, "As spiritual adultery increases in the church, false prophets will flourish as highly sought after speakers, and as Christians accept more of these false teachings indiscriminately, many will fall away, believing in a phony "faith".
The Lutheran Church should beware of politicians in religious clothing.
Posted by Argan Beekan at 5:22 PM 362 comments
Seenaa Gabaabaa Gootota Jalduu - Kutaa 6ffaa
Kutaa 5ffaa irraa kan itti fufe
Barreeffama seenaa mataa duree armaan olii kana keessatti, lolli Qotee bulaa gootota Jalduun geggefamu: biyya keenya irraatti morma keenya gad-cabsinee, sirna gita-bittotatiin salphanee jirachuu manna (irraa), du'a filachudhan, namonni murtawaan onnee fi murannoo qabanin Motummaa Dargii ammam rasaa akka turan kutallewaan darbe keessatti hanga tokko ibsuu yaaleera.
Dargiin (ibidda) lola Qotee bulaa Jalduu irratti bane humnaan dhaamsuu (dhaabuu) akka hindandeenyee amanudhan toftaa abbootiin isaa jeecha "Lafee Arbaa, waliin rukutanii cabsuu" jedhutti gargaramudhan, of-eeggannoo cimaan gadii fageenyan irraatti hojachudhan namoota heddu erga harka kennachsaniin booda, kanneen osoo harka hinkennatiin hafan irraatti namoonni harka kennatani gara qe'ee isanitti galan kun akka de'bi’anii duulan ijaranii gurmeesaniru.
Waraanni Dargii isaani fi hummata gurmesse of-funduura qabee duluuf qinda’aa fii qophaaha turera.
Adooleessa 27, 1978
Baatii Adolessaa keessa Dargii fi waranni isaa namota armaan dura waliin Dargii lolaa turani fi Dargitti nagaan harka kennatan hunda dabalatanii, gara Ofu fi Diggootti gadi duulaniiru.
Duulli Dargii kun gama sadiin tuure. Karaa Dirree, Karaa Ofuu, fi Karaa Diggoo ta'u isaati.
Humni isanii irraa calaan karaa (daandii) gara Diggootti nama geessun hiriiree waan ta'eef, Ulaan Rujjan falmii ta'uuf adeemu (jiru) kanaaf of-qopheesiteerti.
Lollii gama (roga) sadeninuu ganama keessa sa'a 8:00 AM banamee. Lola sa'aa jaha (6) booda ammas loltonni Dargii ummataa qabatanii dhufan waliin lola isaa marsaa calqabaa Ulaa Rujjan itti godhame kanaan rukutamanii duubatti debi’an.
Humna isanii walitti jabeessanii gama sadiin dhufuu dhisanii (jijjiranii), karuma tokkon karaa Ulaa Rujjan cabsanii darbuuf guyyaa lammataa dhufaan. Lollii kun lola ulfaataa ture. Ammas Dargiin waaroo salphinaa uffatee, reenfa isaa funaannatee gara dhufeetti deb'e. Lolli guyyaa lameenuu injifannoon xumuuramera.
Ofuu, Diggo, Dirree, Labuu, Konichaa, Qamaxee, Diggoo-Daadaa, Diggoo-Maccaa, Rujaan, Wiree fi nannowaan biroo ammaaf maqaa isanii yadachuu hindandeenyee, dirree bilisomte eerga tahatee bubbulte jirti.
Torban tokkoo booda, Obbo Mulataa Fayyiso fi Obbo Wagii Sattoo Diggoo irraa gara nannoo Qoftuu ( magalaa Jalduu irraa kilo-metra 10 irraatti kan argamitu fin nanno Qe’ee Obbo Mulataa Fayyiso ture), hidhannoo adda- addaa guttachuuf baddaa Qoftuu qubatan. ‘Geography’ nannichaa xiqqoo ibsuf: Diggon magalaa Jalduu irraa gara dhihaatti fageenyaan gara kilomeetra 40 (40km) yommu argamtu, Qoftun immo magalaa jalduu irraa kilometra 10 fagaattee kara boroo- bahaa ( North –East) irratti argamti.
Waraanni Dargii fi Ummatonni armaan duura gara Diggotti nutti duulan deba'ani gara mana isanitti osoo hingalin magala Jalduu keessa waan turanif, achii (qoftu) jirachuu keenya dhaga'udhan wal-gurani gara Qooftuutti dhufuu isanii Tulluu irraa jirru guubbaa teenyee Teleskophadhan agarre.
Osoo isaan lagaa Qooftuu hince'in laga kana irraatti dhukasni baname. Yeroon isaa ganna waan ta'eef lagdi kun gutee, galaanni isaa danbali’aa ture. Walitti ce'uuf homtuu hinyaadu ture. Kan mo'ees, kan mohatamees hin turre guyyaa sana. Hunda-iyyuu galgalli (dukkanni) addan baase.
Harka kennisisuu isa Marsaa lammataa
Hangga ammaatti lolli xixiqqaa fi gurguddaan magala fi baadiyyaa Oromiyaa keesaatti ta'a tureera. Hogantonni Dargii gama lola kanatin bu'an isaan argamsisan tokko- illee akka hinjirre hubataniiru.
Bu'aa kan argamisisee, toftaa karaa nagaantiin harkaa keennachisuu waan ta'eef gootonni lola kana irratti qooda guddaa qaban, namoota isaan waliin jiran waliin harka keenisisudhaan, ammas kanneen hafan akka harka isanii keennatan irraatti akka ciminaan hojjatan Jarsolii armaan duraa fi Jarsolii biroo dabalatani, lola dhabanii akka deba'ani nagaan galan gochuun, sagantaa qopheefatan dirirsaniiru.
Oromoota Dargii raasaa jiran kana, firoota fi Maatii isanii amansisuun yoo irratti hojjatan, bu'a fiduu akka danda'u hubachudhan, gad- fageenyan, namoota ummataa biratti dhageetti qabu jedhamaan hunda ramadaniru.
Gama Jarsolii biyyatiin toftaan Dargiin qopheesse milka'ee, namonni heeddun harka isanii keenataniiru.
Namoota marsaa isaa lammataa kana keessatti harka isanii keenatani gara Qe'ee isanitti de'ban keessa : Obbo Dirribaa Korjoo, Obbo Dirribsaa Damee, Obbo Raggasaa Bayyan, Obbo Tolasaa Raggasaa, Obbo Raggasa Gamaa, fi kan biroo yoo tahan, ilmi Obbo Mulataa Fayyisoo, Alamuu Mulataa fi Soddaan isanii Obbo Urgessaa Abbabaa, harka hinkenninu jedhani biyyaa badani (bahani), eessa-butanin isanii wallaallamera (dhabameera).
Harka keennachisuu isa marsaa lammtaa kanaan, Dargiin heedduu itti mlika'eera. Obbo Mulataa Fayyisoo, Wagii Sattoo, Raggasaa Fayyisaa, Tilinitii Fayyisaa (Obboleessa Raggasaa), Atomsaa Urgee, Guddisaa Itichaa, Baqqalaa Urgee, Faanaa Ayyanoo, Dirribsaa Wagii, Jaalataa Ababaa, Kaasaa Tafarii Urgessaa Amantee fi Mokonnon harka osoo hinkennin didaniru.
Dargiin namoota qubaan lakkawamaan nagaan harka kennachu didan (hafan) kana barbadeessuu akka qabu amanudhan humna qabu irraatti ummata Qotee bulaa Jalduu maraa kanneen Qawwee qaban hunda kumoota heeddun kan lakkawamaan garaa Diggootti gadii duulichisera. Telsekophidhan heeddumina isanii yoo ilaalamu bay’ee nama sodachisaa ture.
Ajjeefamuu Obbo Katamaa Bultum
Obbo Katamaa Bultum, nama Rorroo halagaaf sarmu hinturree. Obbo Katamaa Bultum, Goota hafee (mudoo) hinqabnee fi jirataa Digooti ture. Katamaa Bultum eenyuu-illee nama sodaatu miti!, Hawasni Diggoo isa jalatu, innis isaan jalata. Motummaa H/Sillase fiis ta'ee Dargiif mataa gad-cabsatee bulee hinbeekuu ture. Ummanni Diggoo, Obbo Katamaa Bultum akka hogganaa isanitti fudhataniru ture. Obbo Katamaa Bultum lola amma ammaatti magalaa fi baadiyyaa keessaatti godhamaa ture irraatti gotummaan goota lola ture dha.
Dargii fi Waraanni isaa dhufani, bakka nannoo Diggoo Maccaa jeedhamu qubataniru. Obbo Katamaa Bultum osoo lola kana irra nuwaliin jiiru dhoksadhaan Jarsoliin akka isa quunnamani harkaa keenachisuf amansisuu yaalan, innis akka harka kennachuf murteesse namuu hinbeeku (quba hinqabuu) ture.
Garuu, lola Dargii waliin godhamu irraatti qophawamaa osoo jiramuu, Katamaa Bultum jechi isaa, namoota hunda rifasise: Jarsolii hirriyyoota isaa maqaa dhawudhaan, Coqorsa fi Marga isaan guduunfanii itti ergaan, Kiisii isaa keessaa gadi guuree, “kun kan Diroo Birqiti” , “kun ammoo kan Bajiroo Yaddeesati”.....jechudhaan maqaa Jarsolii nannoo Coobii jiratan margaa isaanii waliin tarreese.
Akuman asin olitti ibsuuf yaale, gootni Oromoo Katamaa Bultum, nama eenyuu jalatti iyyuu buulee hinbeekine, haala kanaan akka inni harkaa kennatu fi kiyyoo Dargiin qopheseef keessa akka lixuu amansisaniiru. Murtiin isaa harka keenachuu waan ta'eef, akka dhaquu qabu hime. Obbo Mulataa Fayyisoo dabalatee namonni jiran hundi-iyyuu Obbo Katamaa Bultum dhaqee harka kennachun akka irraa hinjirre itti himan, gorsan.
Obbo Katamaa Bultum akkana jechun yaada isaa ibstate: “Jarsoliin Marga fi Coqorsa guuranii, kakatanii waan natti dhaamaniif, sammuu koo amansise wanaan jiruuf ….” , harka keennuu akka qabu ammas dabalee mirkaneesse. Obbo Mulataa Fayyisoo "Katamaa, hima didda malee, du'a hindidduu!, egaa nagaatti kana irraa (ammaan booda) wal-hinagarru” jedheen. Obbo Katamaan ilmaa isaa Dargaggoo Dhugumaa Katamaa waliin hidhannoo isanii gutuu waliin harka keenachuuf bakka nuti jirru irraa gara warra Dargiitti qajeelan (adeeman).
Bakka Waraanni Dargiin duulchise qabatee fi bakka nuti jirru, fageenya kilomeetra lamaa (2) tu’u tu nugidduu jiraa ture. Gamaa fi gamana teenyeetti wal-ilaalla. Katamaa Bultum kiyyoo gama Jarsolitiin Dargiin qopheeseefitti sororee itti lixe.
Katamaa akkuma achii ga'een ilmaa isaa waliin Qawwee irraa hiikanii, harka dubatti hidhanii, battalumatti ajjeesan. Alagaan kakattet nama ganti jechun kanuma!. Jarsoliin hoogantota Dargitiin gowwofamanii obbo Katamaa harka kennachsanis homaa gochuufi hindandeenye.
Gochan kun hundii yeroo raawwatamu, fageenya kilometra lama irraa Telesckopidhaan ni arginaa ture. Goonni Oromoo Katamaa Bultum bifa akkanatiin ilmaa isaa darggaggoo waggaa 25 Dhugumaa Katamaa, waliin ajjeesanii booll’a tokkotti galchanii biyyee irra gargalchan.
Gorsa gaafa sana Katamaan gorfamee fi de'bii inni deebise akka haphee ta'e sammuu kiyya keessatti maxanfamee jira.
Dargiin ajjeechaa Katamaa Bultumiin booda, humna isaa jabeessee, bakka nannoo Xaranxar jeedhamutti lola banuuf dhufe. Akkumaa barame ammas rukutamee gara dhufeetti deebi'uu dirqame. Lola kana irraatti waraanni Dargii funduraatti osoo hinbane, Oromoota marsaa funduura irraatti hirirsudhaan ofi duuba ta'ani namoota heedduu ficcisisaniiru. Oromonni, namonni akka Obbo Fufaa Bashudee faa lola kan irraatti du'aniiru.
Dargiin loola amma ammaatti godhe kana keessatti guyyaa tokko-illee osoo hinmo'iin baronni lakkwamaniiru. Kun ammoo isaniif salphina guddaa ta'eera.
Lola kanaan booda, Dargiin tofta ittin hogantoota waraana kanaa (Obbo Mulataa fi Obbo Wagii) ittin dhabamsisuu (galaafachuu) danda'u irraatti haala gadii fageenyaan kiyyoo qopheesuu eegale. Namni kam-iyyuu osoo quba hinqabaatin, bitamtoota qarshidhaan bitudhaan akka summidhan ajjeesan irraatti waligalaniiru, wixinee qophesuu irratti bobba’aniru.
Arfasaa Bara 1979: Summiin Hoggantoota warana keenyaf Qophawe
Hoggantoonni Dargii fulaaf-fulatti lolanii mo'achuu dadhabuu isaanii irraaa kan ka'een namoota akka Obbo Mulataa Fayyisoo fi Obbo Wagii Sattoo gama Summitiin dhabamsisuuf, nama Obbo Mulataa Fayyisoo biratti amanama ta'e argataniiru. Innis maqaan isaa nama Safaraa jedhamu. Safaraan jirataa Diggoo Daadaa yommu ta'u yeroo hedduu nuwaliin dabarsaa ture. Dargiin gara Diggootti yeroo duulu nuwaliin Dargii lolaa ture. Bara sana namonni lola Dargii waliin godhamu kan irratti hirmatan hundi isanii-iyyuu, "Sibilli fi Dhirrii Qulqqulluu wayya"jeecha jedhutti amanu ture.
Lola kana irratti guyyaa tokko rasasa Dargitiin kufuu dandeenya jedhamee waan amanamuuf, torbanitti ykn torban lamaatti Qoricha Heexoo(Kosoo) dhuguun akka dirqamatti fudhatameera. Namni Foon Jiidhaa nyatee warana dhaqee, rasasan yommu rukutame, foon mummuran inni liqimsee sun, karaa afaniin waan gadii debu'uuf, namnii Heexxoon (Tapeworm) garaa keessa jiirtu ammoo, yoo rasasiin garaa rukutte, kara rasasiin rukute sanaan Rammoon garaa keessa jiirtu, achiin waan ol' batuuf, kana of- irraa eeguuf, nannoo sanatti namni hundi-iyyuu kan itti gargaramnu, firii Haanquu fi Waggarti dha ture. Heexoo ykn Rammoo garaa namaa keessa jirtu kana, battalummatti kan balleessu, Benzila(Benzene or C6H6) dha. Benzila akka salphatti yeroo sana argachuun hindanda'mu ture. Darbee-darbee garuu magalaa Jalduutti nama ergachudhaan inuma argamaa ture.
Hoggantonni Dargii kan Jalduu fi magalaa Amboo jiran oddefannoo kana waan qabaniif Benzila Summii waliin makaa battalumaatti gubee nama ajjeesuu danda'u qophessaniiru. Nama dirqama kana fudhatee, hojii irraa olchuu danda'uus gantuu Safaraa argataniiru.
Safaraan mana jireenyaa mataa isaa qabatuu iyyuu, yeroo hedduu nuwaliin dabarsaa ture. Obbo Mulataa Fayyisoo tiin fira ykn gosa aanteeti waliin jedhu ture. Yeroo hedduu Benzila Obbo Mulataa dha bichisisera. Safaraan namoota nuwaliin jiran biratti amanama dha ture. Osoo nuwaliin jiiru, karaa kamin akka inni Jalduu dhaqee, Qarshidhaan bitamee, Summidhaan hoggantoota waraana Obbo Mulataa Fayyisoo fi Obbo Wagii Sattoo ajjeesee badhafamuuf akka qophawee, namni beeku tokko-illee hinjiiru ture.
Galgaala gaafa tokkoo, bakka hundi keenya jirrutti, bitamtichii kun Safaraan, bakka jireenya keenyaa dhufuun ergaa nuwaliin asawaa oleen booda Obbo Mulataa Fayyisoo fi Obbo Wagii Sattotiin "Benzila nama lamaaf ta'u nan qaba koottaa dhugaa jedheen." Wagii Satto fi Mulataa Fayyisoo summii Dargiin Benzila waliin makee qopheeseef dhuganii, gubatanii du'uuf, “ barii ganama dhufnee dhugnaa, manatti nu'eegi!” jeechun ganiticha Safaraa waliin beellama qabataniiru.
Mulataa Fayyisoo fi Wagii Sattoo Summii kanaan du'ani moo hafaniiru?
Kutaa 7ffaan itti fufa.
Posted by Argan Beekan at 6:12 PM 2 comments
Seenaa Gabaabaa Gootota Jalduu - Kutaa 5ffaa
Kutaa 4ffaa irraa kan itti fufe
Wa'een Lola Qotee bulaa Jalduu dhukkba bowwoo itti ta'udhan, hogantoota Dargii irriba isaan dhorkeera. Mangistuu H/Mariam dhimma lola kanaa ilalichisee yeroo dubbatu "Tinshuwa Ertiraa" maqaa jeedhu itti moggseera. Ertiraan Xiqqoon nutti kaate jeechuu isaati. Yommu sana Ertraan bilisumma ishif kontooffattee Dargii lolaa turte. Hanga ammaatti (yoonatti) waranni duulee Jalduu dhaqe, waaroo salphinaa uffatee, qaana'ee, kottee koo nabaasi jeedhee, of- irraa garagalu malee, injifannoon inni galmeesse hinjiiruu ture. Bara sana, kessaa fi alaan cinqamee, funyoon (wadaroon) morma isaatti dhiyatee kan ture Motummaan abba Irree Dargii, funyaan isaa jala ykn fageenyaan kilometra 125 irraatti, lola Qotee bulaa Jalduu to'annoo jala olichuu dadhabera.
Oromoo mirga isaa fi eenyummaa isaa kabajachifachuuf gara kutannodhaan hidhannoo isaa jabeeffate tokkummadhaan ka'e, dhaabuu akka hindandeenye halaan hubateera Dargiin.
"Harka Cabsuu dadhabde dhungadhu!" jecha jedhutti gargaaramudhan gama lolli kun dhabachuu danda' u irraatti hojachuun hiikoo (furmaata) rakkoo (dhibdee) kanaa akka ta'ee hubataniru (Warri Dargii).
Bulchaan Kutaa Shawaa yeroo sanaa kan ture Dr. Mokonnon Jotee fi hoggantonni
Dargii kan biroo, Ibiddi Jalduu kessaatti qabsifame dhamee, akka nagaan bu'u tasisuun, akka ummanni Jalduu ka'ee waranuu kan godhe ykn kan balleesse, Dabballoota Mootummaan Jalduutti ramadee waan ta'eef, kan Qawwee fudhatee lolaa ture hundi nagaan akka Qe'ee isaatti deb'ee, nagadhan jiraatu kan jedhuu, olola siyaasa gama danda'amee hunda'an facaase.
"Qawwee keessanis naminni isiin gaafatu hinjiiru!" jechuun kadhaa calqabe. Jirattonni magalaa Jalduu manni isaani cufame, mannettiwaan isanii banamee akka jireenya isaanni nagaan geggessan olola faca’e irratti hunda’un namonni magaalaa keessa jiraatan gara mana isanitti deebi’an (galan).
Habashonnii manneen daldalaa magalaa Jalduu keessaa qaban baqatanii gara Finfinneetti (Shaggarii) dhufanii waan tureef, isaanis deebi’ani mana daldala isanii cufamee kan ture banan. Hogantonni Dargii Kan Dr.Mokonnoon Joteetiin durfaman, Jarsoliwwaan (maanguddo) Anaa sana keessaatti argamaan walitti wamudhaan akka ummanni lola kana irraatti hirmate hundi, balleessan lola kana qabsisee kadairoota Mootummaa wan ta'eef, nagaan akka harkaa isanii kennatani jireenya isaani gegeesan hubachisee. Mokonnon Jotee Oromoo waan ta'eef, afaan Oromotins dubachudhaan akka jaarsolii kana amansisee keessa beektonni ni dubbatu. Olola Mokkonnon Jotee gama Jarsolittin facaase kana irraatti hunda'udhaan namonni heedduun harkaa isanii kennatan.
Mokonoon Jotee, kanneen harkaa isanii kennatan, afuura garii, tajajilaa fi gorsa gaaridhaan Qawwee isanii waliin akka maatii isanitti debi’an godhe. Qotee bulaan Jalduu guyyaa gaafa Jimataa, Sanbataa, Wixataa lola irraatti hirmaataan hundi harka isanii kennatan.
Kanneen harkaa kennatan kun ammoo debi’anii kanneen hafaan akka harkaa kennachisan irraatti akka hojjatan godhame.
Keessattuu Obbo Mogoora Tujjoo gama Obboleessa isaani, kan Ayyantuu ta'an , Obbo Nuurasaa Tujjoo Gurmessaa tin, akka harka kennatan irraatti hojjatan. Obbo Nuurasaa Tujjoo Gurmesaa warra Qaalluu ti turan. Biyyi isanii, biyya Giiftii Elemoo jedhamee bekkama. Ayyanni Obbo Nurasaa irratti bu’uu ammo Cabsa jedhamee beekkama. Obbo Mogoraa Tujjoo dhirummaa fi Jagnummaa isaatiin hafee (mudoo) akka hinqabne hundi iyyuu kan irratti waliigalu dha.
Akkumaa yaadamee (akeekkame) hojii guubbaa olchudhaan, Obbo Mogoraa Tujjoo obboleyyaan isaani: Obbo Gobasaa Tujjoo, Obbo Boranaa Tujjoo, Obbo Haruu Tujjoo fi namoota isaan waliin jiran waliin harka isaani akka kennatan godhame. Gama Dargitiin, yommu isaan harkka kennatan, simannaa fi kabajaan adda isaniif godhame. Harka keennun Obbo Mogoraa Tujjoo, Amilee (moorala) kanneen hafanii osoo hintuqin hinhafne.Namonni lola darban irraatti hirmaatan hundi isanii nagaan harka kennachudhaan Qawwee isaani waliin garaa mana isanitti deba'an. Jarrewwan harka keennan kun, debi’anii kanneen hafan akka harkaa kennachisan, ololli siyasaa bay’inaan afarfame.
Akka kanaan, Obbo Tolasaa Hata'u , Ilma isaa fi namoota isa waliin jiru waliin harka isaa akka kennatuu karaa Jarsolitiin irraatti hojjatame. Obbo Tolasaa Hata'u, Ilma isaa qabatee, namota wajjin jiru wajjin, gara qe'ee isatti deb'ee. Obbo Tolasaa Haata’u nama seenaa bareedaa qabuu ture. Inni (Obbo Tolasaa Haata’u) lola Gotonni Oromoo hammayyaa (new generation of Oromo heros) Wayyanee (TPLF-EPRDF) waliin Jaldu bakka Kilbee jedhamu irrati, baatii Adoolessaa 1992 godhameen irratti oto-loluu gotumman goota wareegame dha. Lola Kilbe irratti Adoolessa 1992 godhame kana gara fuuladura bal’inan ibsuuf nan-yaala. Ammaf garuu, lola kana gaazeexaan “USA Today” jedhamu gabaasee turun isaa tuquun gaha natti fakkata.
Dr. Mokonnon Jotee, lola qotee buulan Jaalduun Dargii irratti geggefame: isa akka wanta “Jeneral” tokkon hoggaanuutti qinda’ee fi isa akka loltuun hammayyaa (professional army) walihogganamudhaan, yeroo gabaabaa keessaatti injifannoo irratti injifannoo galmesisudhaan funduura irraatti deemaa jiiru kana, akka dhaabbatee nagaan bu'uu irraatti sagantaan inni baafate hojii irraa oleera.
Gama biroon ammoo akkumaa Jalduuti ta’e, lollii hamaan (cimaan) Gindabarat itti ni kaa jedhani
tilmamudhaan, waraanni Dargii heedduminaan dhaquu iyyuu, osoo homtu isaan hinqunamiin Magaalaa Kaachisi to'achuu danda'niiru. Asaffaa Maracoo Galataa, guyyoota murtaa'eef magalaa keessa kan jiran (kittilayyota Dargii) rukutee keessaa basuu-illee, yeroo Dargiin waarana ramadee erguu magalaa keessaaatti loluu hawwii hinhoraane ture. Akkuma mootummoni halagaa adda addaa ( kan akka Faashistii Xaaliyaanii) faa ilaan Oromoo maqaa adda adda itti kennun wal-waraansiaa turan, Dargiin-illee dabaaree isatiin summii adda- addaa ilaan Oromoo giddutti facaasudhaan akka isaan wal-shakkan, walitti gaarreffatan, darbes ammo, wal-rukutani, harka wayyaa jalaatin (lafa-jalatiin) irratti hojachaa turera. Gindabarat itti hanga tokko milka’eera. Gufuu halagaan isaan gidduu dhaabe, Oromoota tokko-tokko gufachise, akka isan walitti bu’an godhera. Rakkon Gindabarat keessa ture kana dha. Obbolewwaan lamaan , Maaccaa fi Tulamaa jechuun wal-hiruun, wal-irratti ka’aa, duulaa turaniru. Kun ammoo dogoggora gudadha ture. Sababii kanaf, Qotee bulaan Gindabaraatti irraa caalaa wal-waraanuu malee tokkummaan ka'ee, Dargii loluu hindandeenye. Gamni(gareen) tokko, Dargii waliin yoo dhabbatu, gamni (gareen) hafee immoo Obbo Asaffaa Maracoo waliin dhabateera.Walitti bu’insi Oromoo giddutti uumame immo Dargiif carraa guddaa ture. Rakkinni (walitti bu’iinsi) kun akka uumamuf irratti hojjachun isani hin-ollee. Waan hundafuu gochaan kalleessa obbolewwan lamaan gidduutti godhamee dogoggora cimaa (hamaa) akka ta'ee namni dhimmaa kana keessa beeku ni hubata.
Dr.Mokonnon Jotee, akeekni inni wixinee qopheese, gutummaatti bakka gahu baatu iyyuu, gama jaarsolitiin hojii guubbaa oleerafi.
Namonni akka Obbo Mulataa Fayyisoo, Obbo Wagii Sattoo, Obbo Raggasaa Fayyisaa namuu akka harkaa keenatan hingafane. Jarsoliin Mokonnon Joteetiin ergamaan osoo dhqanii gafatanis akka salphinaan debi’an nibeeku. Firaa Obbo Mulataa Fayyisoo keessaa, kan lola gaafa isaa calqabaa fi isaa magalaa Jalduu rukutuu irraatti hirmaate kan ture, Obbo Guddisaa Gamaa Utaala harka kennateera. Obbo Guddisaa Itichaa Layyoo akka harka kennatu gafatamee dideera. Obbolewwaan lamaan Obbo Baqqalaa fi Obbo Atomsaa Urgee, haatii isanii obbolettii Obbo Mulataa Fayyisoo waan ta'hateef, Obbo Mulataa Fayisoo Eessumaa isanii irraa (biraa), du'a malee homtuu addaan isaan hinbaasu.
Gootonni Jalduu, akka Kannisa Gaagurri jalaa tuqamte, wal-qabatee, cininnatee Dargii Albaasaa turte, amma olola Dargiin irratti adeemsisa jirun, tokkumaa fi qindominni isanii laafaa, humni isaa xiqaachaa dhufera. Kanaan (Asiin) booda, haalli duraan yadamee ka’ame, ka'uumsi (kaayyon) isaa bakka ga'u hanqachuu isaa irraa kan maddee, Qabsoon hidhannoo akkumaa armaan duraa magalaa keessa garaa baadiyyaatti gad ba'e, amma ammoo baadiyyaa irraa garaa Gammojjitti gad bu’uu dirqmee jira. Akkuma kanaan halaa Gammojjii mijeffachuuf saganteeffame. Dargiin namoota harkaa keenachuu didan mannii fi qabeenyii isaaan akka barbada'u godhudhaan, mannetwaan Obbo Wagii Satto, Obbo Baqqalaa Urgee, Obbo Raggasaa Fayyisaa qabeenya mana keessa jiruu waliin ibidda itti naqan. Raggasaa Fayyisaa qabeenyi innii Abbaa isaa irraa dhaale takka-illee hinjiiru ture. Bu'aa- ba'ii meeqa keessa darbee nama qabeenya hore ture. Magalaa Cobii keessaatti Suqii daldalaa yommuu jalaa saaman, garii ammoo ibidda itti naqaniru.
Gootota Jalduu kessaa, gareen harka Dargiiti kennachu dide, Dargii waliin hanga dhumaatti falmuuf nannoo Ofuu fi Diggoo jedhamun beekamu qubachudhaan achuma qubannee akka lollu kan jedhuu murtiin darbe.. Nanoon kun yoo Xiqatee guddinni isaa lafaa Anaa tokko ti gadii miti. Gotonni Jalduu gara Gamojjii Ofuu fi Diggotti gadii bu'udhaan ummataa ijarudhaan, Dirree walabomtee godhanii irraa qubatame. Waraannii Dargii yoo dhufe, ummata Diggoo of-dubatti hambifne akka lollu kan jedhuu irraatti walii galaamee. Waggii Sattoo, Mulataa Fayyisoo, Guddisaa Itichaa Layyoo, Baqqalaa Urge, Atomsaa Urgee fi namoota biroo waliin karaa (daandii) guddaa Diggootti nama geessuu qabatani akka qubatan taasifame. Bakki lollii itti lolamuu qabuu filamee, Ulaa Rujjaan akka ta'u murtaa'e. Ulaa Rujjan irraatti dha'annoon gariin tolfameera.
Karaa Dirree jedhamuun ammoo Raggasaa Fayyisaa namoota waliin jiiru waliin dhunfateera. Lolli bakki itti ta'u qabuu nannoo Qamaxxee jedhamee bekkamuu akka ta'u hundii iyyuu irraatti waliigaleera.
Gama Ofuu tiin ammo Obbo Jaalataa Abbabaa akka eegu godhameera. Obbo Jalataa Abbabaa Qadiidaa loltota Oromoo waliin ta’e qabateera. Kanaan (asiin) booda, ummataa nannoo sanaa ijaruu irraatti bobba'me (hojjatame).
Umannii nannoo Digoo, Blisomsudhaan sirna nama nyataa Dargii nannoo Diggoo akka ga'u
hindandeeenye irraatti maryatamee laabsameera. Nanoon Diggoo fi Ofuu osoo Dargidhaan wal- hinbeekiin waggoota lamaa oliif walabomtee jirateeritti.
Guyyaa gaafa tokko Diggoo bakka qubannee jirru irraa garaa Ofuu dhaquuf(deemuf) osoo deemnuu namni “Luluu” jedhamu, akkumaa Obbo Raggasaa Fayyisaa duura deemaa jirutti itti dhufe. Obbo Raggasa fi Luluun duranuu wal-beeku. Yeroo heedduu Obbo Raggasaa waan tokko yoo garaa isaa ga’e ykn hanqate, Ayyanaa Inni ittin amanu, Jaben, galateeffata. Akkuma Luluu argeen “yaa Jaaben innuma jirtaa?, bakkumaan jirutti naa fiddee?”, jedhee. Luludhaan, “namni akka kee kun ummataa keenya keessaa qulqula'au qabidii”, jechudhan tarkanfi adabaa isaa dhumaa irraatti fudhate. Luluun Gojjamee Xaanqoyii (witchcraft) fi jiraataa magalaa Jalduu ture. Namni isa hinbekine hin turre.! Waan adda- addaa nan godhaa jedhee ......namoota irraa horii namaa nyataa ture. Obbo Raggasaa Fayyisaa yeroo inni Dargiin loluuf qopha'u sana namichaa Lulu jedhmu kanaan wal-arganii bayyee waliin dubatani ture. Luluun Raggasadhaan "Qorichaa” Xonqoola waan mara jalaa kan sibasuu( ittisu), siifan hojjadha, rasaasni yommu sitti dhuka'ees akka sihinrukunnee/ sinajjefnee godha jeechuun, qarshii kumotaan lakkawwaman fudhateera. Kanaan booda rasaasni isa rukutu akka hindaandeenye Obbo Raggasaan ergaa hubachuseen booda, Obbo Raggasaan namicha Lulu jedhamu kana shakuu isaa irraa kan ka'een egaa anaaf nagoteerita, Fardaan yabadhee adeemutis na godhii, akka najalatti hinrukkunnee jeedheen. Fardafis ammumaa sana Obbo Raggasaan Luluuf kaffalee (baasee). Xonqayii Gojjamee kan tahate Luluun, armaan booda atis ta’e Fardi ke rasasii Matriyesii-illee rukkutuu akka hindaandeenyee Obbo Raggasaa ergaa hubachiseen booda horii isaa amaarratee gara mana isaatti deb’ee. Raggasaa Fayyisaa goyyoota murtaween booda mee nan mirkaneefadha jedhee, Fardaa isaa Sangaa (Stalone) ittiin loluuf itti Xonoqolchifate kana goodatti (dirretti) gadii basee rasaasa gadii yoo itti dhiisuu, sangaan Fardaa Luluun itti xonqole jedhee horii nyaate, gooda (dirree) irraa diriree. Fardi Obbo Raggasaa galaafatame. Luluun horii Raggasaa gowwomsitee akka fudhate Raggasaan hubatee (mirkanessifatee), gaabbin qubaa isaa nyaate. Iccitti kana dhokfatee osoo jiruu, Luluun karaa gubbaa irraatti argatee, "Jabeen bakkan jirutti na fidee!” kan inni jedhee kana irraatti.
Kun osoom kanaan jiiru, Qeesiin Mamiree Mammoo Abiree jedhamu tokko, “Taaboota
Aabboo” jedhamu mana sagadaa (Bataskaana ykn ‘Church’) isaa keessaa basee, uffata baaqqee tokkon mare, bakka nuti jirruu Dirree ti fide. Abboonis Dargidhaan loluuf bosoonatti gale jechu dha. Yeroo sana sammuu kiyyaa keessa kan jiru, akkumaa har’ra Qesonni jibbaa Oromoo fi afaan Oromoom irraa qaban,“Taabonni deemuu diide” , yoo jeedhaan sababni isaa Qubee jibbee jedhan kana, yeroo sanas namni tokko, Taaboota huccuun marmaree, bobaa jala godhate, gammojji nuti jirrutti fida kan jedhuu bekumsa (amantii) hinqaabu ture. Mammiree Mammoo Abireetin carqii (uffata) sana Taaboticha irraa fudhee akka nu agarsiisu goone. Ajaaiba! Ture. Waan hundafu Mammoo Abbiree Taaboota Aabboo jedhamuu kana holqaa dhagaa tokko keessa akka godhuu taasifame. Mammoo Abbiree waggota lamaa oliif erga nuwaliin tureen booda, dhuma irratti harka Dargitti kufee, gara waggota jahaa (6) mana hidhaa turuun, ergaa hikkameen booda, magalaa Ambootti galee amma-illee achuma jiraata.
Dargiin itti deb'ee lola osoo hinbaniin baatii jaha (6) ta’era. Namoota armaan duura nuwaliin Dargiin loola turan barnoota siyasaa keennuun, debisanii ijaruun, waliin ta'anii, gara Diggootti Duuluuf ka'niiru (qophaniru). Gara (gama) keenyaan ammoo akka waraannii Dargii ummataa qabatee duulaaf gara keenyaatti dhufaa jiiru dhageenyeera. Gama Daandii Diggootti namaa geessuu, ummata Diggoo of-duubatti hambisudhan Ulaan Rujjaan jedhamu dhunfanatameera (qabanne jirra). Dargiin, kan ofi isaa nucabsu yaalee dhadhabe, Oromoo-Oromoon cabsuf, wal-irratti nuduulchisunf qindaa’ee dulutti jira.
Kutaa 6ffaan itti fuufa.
Posted by Argan Beekan at 5:58 PM 0 comments